China 5 liter ultrasound jel akpa factory na suppliers | Kaiguan
5 liter ultrasound gel bag bụ akpa ọhụrụ nke na-ejikọta mgbanwe nke akpa na igbe igbe na uru dị mma nke ihe ndị siri ike ma ọ bụ ihe na-adịghị ike, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ọzọ dị mma na nhọrọ ndị a niile. Ọ nwere akpa rọba nke nwere ụdị cube, ọtụtụ oyi akwa, mgbata, okpu ma ọ bụ valvụ na igbe kaadiboodu.
5 liter ultrasound gel akpa bụ nke multilayer plastic. Igwe dị n'elu (polyamide + polyethylene) na-echebe site na ikuku oxygen na mmiri; njupụta ya na ihe mejupụtara ya nwere ike ịdị iche dabere na mkpa nke onye ahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Igwe dị n'ime (polyethylene) na-agbanwe ma na-eguzogide ịdọkasị ahụ.
5 liter ultrasound gel bag bụ akpa ọhụrụ nke na-ejikọta mgbanwe nke akpa na igbe na uru ndị dị mma nke siri ike ma ọ bụ nke siri ike.It na-enye ndị ahịa ngwugwu ngwugwu nke na-eme ka ohiri isi na-emepụta ihe na-eji. Emepụtara ka ọ bụrụ ụdị igbe, Cheertainer nwere ikike pụrụ iche n'ichepụta ya na ihe owuwu ya. Emepụtara ya na gussets n'akụkụ nke "ụdị dabara adaba" na akpa ahụ, Cheertainer na-enye ohere maka nnyefe zuru oke n'efu.
Nke gara aga: Jerry Can nwere ike imebi
Osote: Nkwakọ ngwaahịa na-acha anụnụ anụnụ
Akpa n'ime igbe 5l
Akpa n'ime igbe maka
Akpa n'ime igbe kwụ ọtọ obere akpa
Eco enyi na enyi akpa n'ime igbe
Akpa Enchedora na Igbe
Akpa mmanụ n'ime igbe
Akpa dabere na osisi n'ime igbe
Akpa jupụtara ntụ ntụ n'ime igbe
Akpa mmanya na igbe
Strong ihe gburugburu ebe obibi vetikal akpa na b...
3l 5l 10l 18l 20l vetikal akpa na igbe (cheertai ...
Akpa ncha mmiri mmiri na ihe ncha ntutu na-eme mkpọtụ.
Akpa kwụ ọtọ (cheertai...